Real Madrid Oo Hanatay Horyaalka Spain + Barcelona Oo Hungowday + Sawiro | Horn Cable TV
22nd May 2017 at 12:02 am
Real Madrid Oo Hanatay Horyaalka Spain + Barcelona Oo Hungowday + Sawiro
Posted by admin Naadiga Real Madrid ayaa ku guuleystay horyaalkoodii koobaad ee La Liga Ah tan iyo 2012 kii, kadib markii ay guul qurux badan ka gaadheen ciyaartii gunaanadka ee sida weyn looga dhur sugayay, taas oo ay ku karbaasheen kooxda Malaga.
Xiddiga Cristiano Ronaldo ayaa bilowgii ciyaartaba shabaqa ku shubay goolkii koobaad ee Real Hogaanka ciyaarta ku qabatay, isagoo ku leexiyey kubaddii uu u soo gujiyey Isco, kalana daba wareegay goolwade Carlos Kameni shabaq banaana ula tagay oo dhex dhigay.
Waxaana mid labaad raaciyey Karim Benzema qaybtii dambe ee ciyaarta kadib markii uu soo tufay goolwade Carlos Kameni darbadii xooganayd ee uu ku ganay Sergio Ramos.
Real, oo dhibic kaliya u baahnayd, waxay hadda kadib isu diyaarinaysaa, kulanka Juventus ee Finalka Champions League, si ay ugu labayso guulaha sanadkan.
Dhinaca kale Kooxda kubada cagta ee Barcelona oo hirdan ugu jirtay in ay real ka hor qaado koobka horyaalka Spain isla markaana badisay ayaa fadhida kaalinta labaad, waxaanay sidaasi ku noqotay kooxda labaad ee kala horeynta horyaalka dalkaasi